10 Izindawo Ezinemibala Emhlabeni | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izindawo Ezinemibala Emhlabeni
Qeqesha Ukuhamba eDenmark, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Poland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe
Ifihliwe kude nezixuku zezivakashi, lezi 10 izindawo ezimibalabala kakhulu emhlabeni, ziyakhuthaza ngempela. Amaciko nababhali bathole ugqozi kulezi zindawo ezimibalabala. Ngakho, inganekwane ziyafezeka, futhi ukuvakashela kunoma iyiphi yalezi zindawo kuzoba yinto eshintsha impilo nakuwe.
1. Izindawo Ezinemibala Emhlabeni: Cinque Terre, Italy
Usuku lobusika olumpunga noma usuku lwasehlobo olushibhile okwesibhakabhaka, ICinque Terre inemibala kunoma yisiphi isimo sezulu. Izindlu ezinhle zinombono wolwandle oluluhlaza futhi zakha isithombe esimibalabala kakhulu. Ngaphezu kwalokho, wonke amadolobhana owavakashelayo eCinque Terre anemibala eminingi kunomunye, ngezindlu ezipendwe ngombala ophuzi, pink, okubomvu, namathoni ewolintshi.
Ngakho, ndawonye nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka namagquma aluhlaza, Isifunda seCinque Terre e-Italy singenye yezindawo ezimibalabala kakhulu emhlabeni. Lolu hambo olumibalabala empeleni luqala edolobheni laseLa Spezia, idolobha elikhulu elinechweba nendawo yokusuka yesitimela saseCinque Terre. Ukuhamba uzungeze iCinque Terre ngesitimela ihamba phambili ngoba isitimela sidlula isigodi ngasinye, ngakho-ke ungahamba ubuyele kunoma iyiphi indawo noma kunini lapho ufuna khona emini.
2. Izinkambu zeTulip, Abase Netherlands
Okuphinki, emhlophe, iwolintshi, onsomi, Izinhlobo ze-tulip zaseHolland zinomlingo kuyo yonke imibala yothingo lwenkosazana. Indawo enhle yokubona izinkambu ze-tulip ezimangalisayo iseKeukenhof futhi ungabuthanda ubuhle mahhala. Izinkambu ezimangalisayo ziyimizuzu eyishumi nanhlanu uhamba ngezinyawo usuka eKeukenhof. Nokho, ubuhle obungavamile ngempela buyaqhubeka eminye imizuzu eyishumi nanhlanu kuya kuma-tulips amahle nakakhulu.
Ungakwazi ukujabulela lokhu kubuka okumibalabala phakathi kuka-April kuya maphakathi noMeyi, ngesikhathi sama-tulips’ imbali. Izinkambu ezinkulu ze-tulip zihambo olufushane ukusuka e-Amsterdam, ngakho kuyoba yisimangaliso uhambo day eNetherlands’ emaphandleni. Ngaphezu kwalokho, ungaqasha ibhayisikili njengabantu bendawo ubabaze izimbali ezinhle.
3. Izindawo Ezinemibala Emhlabeni: Menton Cote D'Azur, France
Emaphethelweni amahle aseFrance Riviera, kodwa kude ne-paparazzi e-Monte Carlo, I-Menton iyidolobha elimangalisayo elingasogwini. Izindlu ze-pastel Belle Epoque, engeza ebuhleni baleli dolobhana eliphuphayo futhi wenze mesmerize isivakashi sokuqala.
Ungafika e-Menton ukusuka kunoma iyiphi indawo eFrance noma e-Italy njengoba iseduze kakhulu nomngcele wase-Italy. I-Cote D'Azur iyisifunda esihle e-France futhi yenza indawo enhle yokuya kuyo ukuze uphumule.. Ngakho, ngaphezu kokwenza izithombe ezinhle ngemuva kwedolobha elimibalabala, Ukuhamba ngesikebhe kuyizindlela ezinhle kakhulu zokuchitha iholide elimangalisayo eMenton.
4. UPelourinho, ESalvador
Ubizwa ngokuthi idolobha ngaphakathi kwedolobha, le isikhungo sedolobha elidala IPelourinho eSalvador ingenye yezindawo ezimibalabala kakhulu emhlabeni jikelele. Indawo eyake yaba khona endalini yezigqila namuhla iyindawo enemibala egqamile futhi enempilo eSalvador. Le ndawo inamafacade anemibala yezakhiwo zamakoloni futhi iyikhaya lamaciko, abaculi, nokuphila okuhle ebusuku.
Ngaphezu kwalokho, I-Pelourinho enemibala eminingi iyisikhungo samasiko amaningi lapho ungafunda khona ngamagugu aseBrazil nase-Afrika. I zokudlela ezinhle e-Pelo banikeza izitsha ezimnandi ezivela kokubili ukudla. Ngakho, ngemuva kokuqeda ukuthenga izinto eziyizikhumbuzo ezitolo eziningi ezenziwe ngezandla ezungeze, ungakwazi ukunambitha ukudla emangalisayo kusuka ku-African and Brazilian cuisines.
5. Izindawo Ezinemibala Emhlabeni: Wroclaw, Poland
Idolobha elikhulu kunawo wonke eWestern Poland, I-Wroclaw ingenye yamagugu afihliwe asePoland. UWroclaw ungumbungazi ovelele indawo okuyiwa kuyo e-Europe, kanye nezakhiwo zayo ezimibalabala kuyenza ibe enye ye lamadolobha amahle e-Europe. Indawo enemibala kakhulu esigcawini semakethe yangenkathi ephakathi, lapho ungathatha khona umoya omnandi kwenye yezindawo zokudlela eziseduze.
Ngakho, qiniseka ukuthatha ikhamera yakho nezicathulo ezinhle zokuhambahamba emizileni enemibala nedolobha elidala. Kusukela ebusika kuye ehlobo, i-Wroclaw enemibala izokubingelela ngokukwamukela okufudumele, ne-pierogi yasePoland eyayigcwele amazambane, ushizi, noma izithelo.
6. Isiqhingi saseBurano, Italy
Esinye seziqhingi ezintathu ezidumile ngaseVenice, IBurano iyona enemibala phakathi kweziqhingi ezintathu ezinhle zase-Italy. A isikebhe uhambo kude nezwekazi, Izindlu zikaBurano ezipendwe ngokugqamile zinhle kakhulu indawo yeholide ye-off-season. Ngenkathi ungazungeza lesi siqhingi ku 2 amahora, uzogcina uchithe usuku lonke, ukuthatha izithombe nje.
Izindlu zabadobi ezibukekayo eduze kwamabhuloho kanye nemisele eminingi yengeza ebuhleni bukaBurano. Lokhu kungeza esithombeni esinjengekhadi leposi lokunye okuphezulu 5 izindawo ezimibalabala eYurophu. Ukuvakashela eBurano wuhambo oluhle losuku ukusuka eVenice, ilungele ukuthenga intambo neziphuzo zantambama ze-Aperol ngokubukwa kwedike laseVenetian.
7. Izindawo Ezinemibala Emhlabeni: Nyhavn, Copenhagen
Itheku elihle lake lagqugquzela omunye wababhali bezincwadi zezingane abakhulu kakhulu ukuthi abhale iNkosazana nePea. Yebo, cha. 20 I-townhouse yayiyikhaya likaDanish Hans Christian Andersen. I-Nyhavn enemibala yayiyichweba elimaphakathi, lapho wawungezwa khona amatilosi’ izingcingo cishe nganoma yiluphi ulimi.
Namuhla, i-Nyhavn elungisiwe yilapho abantu bendawo beza ukuzophumula ekupheleni kosuku. Isidlo sakusihlwa ngomculo we-jazz, ukubukela ukushona kwelanga phezu kwezikebhe nezindlu zasemadolobheni ezimibalabala, kuyinto emangalisayo.
8. I-Guatape, Colombia
Ngezicabha, izindonga, futhi uphahla lunemibala ehlukahlukene, Idolobha laseGuatape liyidolobha elinemibala eminingi eColombia. Leli dolobha elimibalabala liyidolobhana lokungcebeleka eColombia, ngemibono nezintaba ezimangalisayo. Ngakho-ke, i umbono omangalisayo yedolobha lonke nemibala yalo, ungakwazi ukukhuphukela eLa Piedra del Penon, futhi phezulu kwe 740 ithatha umbono omangalisayo wendawo enemibala eminingi emhlabeni ikuvulela wena.
Nokho, izingxenye ezigqamile zedolobha ziseZocalos, izingxenye ezingezansi zezindlu. I-zocalos imihlobiso ependwe ngesandla, imidwebo ethile yezilwane noma yembali, kanti ezinye zimane ziyimihlobiso emibalabala. ukuze uphethe, hlela okungenani izinsuku ezimbalwa’ uhambo oluya eGuatape ukuze ukwazi ukuhlola imigwaqo egqamile futhi enemibala eminingi emhlabeni.
9. Izindawo Ezinemibala Emhlabeni: Colmar, France
Izindlu ezimibalabala ezinamapulangwe angamahhafu, imisele ehlotshiswe ngezimbali, I-Colmar iyidolobha elihle laseFrance lapho izinganekwane ziphila khona. Imisele emihle izokuholela emigwaqweni ekhangayo iye ezigcawini ezivulekile. Lapha, abadobi babevame ukuhlala baxoxe ngezigigaba zosuku nezindaba zolwandle.
Ungafika e-Colmar usuka e-Basel e-Switzerland noma yiliphi idolobha elikhulu e-France, ngesitimela. Ngakho, beka phansi ukuvakashela e-Colmar ohambweni lwakho lwamaholide aseYurophu. Enye inketho enhle ukuchitha lonke iholide lakho e-Colmar kuphela. Noma kunjalo, kunezinto eziningi ongazenza e-Colmar ngaphandle kokuthatha izithombe zendawo enemibala eminingi eFrance. Ngokwesibonelo, ukuhamba emseleni, ukuthenga emakethe embozwe, nokunambitha iwayini le-Alsace.
I-Paris iya e-Colmar Ngesitimela
Zurich ukuya eColmar Ngesitimela
E-Stuttgart ukuya e-Colmar Ngesitimela
Icashe esigodini esiluhlaza, nje 2 amahora ukusuka eTangier, iyitshe eliyigugu eliluhlaza neliyigugu kakhulu i-Chefchaouen. Kupendwe ngokuluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe, ngemihlobiso enemibala, I-Chefchaouen iyindawo egqame kakhulu eMorocco. Kufana nesiqhingi saseGreece iSantorini, imigwaqo ewubukhazikhazi kanye nezakhiwo zikhanga isihambi esibucayi kakhulu.
Izinganekwane zithi ukukhetha kwemibala eyingqayizivele kwaqala ekhulwini le-15 lapho amaJuda ahlala kuleli dolobhana elincane. Ngakho-ke, umbala oluhlaza ufanekisela isibhakabhaka kanye nokuxhumana nonkulunkulu. Nakuba abantu abangamaJuda bengasezona izakhamuzi zaleli dolobhana elincane, nokho indawo yagcina ubuhle bayo kuyo yonke iminyaka. Namuhla, leli dolobhana elincane liheha izinkulungwane zezivakashi, ngakho-ke zilungiselele ukuhlangana nezixuku ezijabule ezizungeze wonke amakhona aluhlaza.
Thina ku Londoloza Isitimela uzokujabulela ukukusiza uhlele uhambo oluya e- 10 izindawo ezimibalabala kakhulu emhlabeni.
Uyafuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi elithi “Izindawo Ezingu-10 Ezinemibala Kakhulu Emhlabeni” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fmost-colorful-places-world%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Okumibalabala ColorfulCities ColorfulPlaces ColorfulTowns Mostcolorfulcitiesineurope mostcolorfulplacesworldwide